Julie van Espen, Onye Belgium Belgium Anne Faber na onye ogbugbu bụ Steve B. onye Belgium Michael P. na PsyOp kachasị ọhụrụ? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 7 Ka 2019	• 7 Comments
Ọ bụ akụkọ ọzọ dị ịrịba ama, akụkọ Julie van Espen (23) na onye na-egbu ya Steve B. Akụkọ a bụ ozugbo a na-akpọ Dutch Anne Faber (25) na onye na-egbu ya Michael P., ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ngwa ngwa kubie ume. Anyi na - emeso mmekorita uche (PsyOp) nke ozo ga esi tinye iwu ohuru n'ime Europe, ma obu ma obu na Belgium? O doro anya na anyị na-ahụ ihe oyiyi na mgbasa ozi na na ihe oyiyi ahụ kwenye anyị.
N'ọtụtụ isiokwu m kọwara ihe mere ikpe Anne Faber (nke Michael P. ji bụrụ onye na-eme ihe) bụ ihe yiri ka ọ bụ PsyOp (ọrụ uche). Ọrụ iji megharịa iwu. Ka m malite site na ịkọwa ọzọ mgbasa ozi na-egwu egwuregwu egwuregwu a na ihe Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta nchịkọta bụ na o yiri ka a ga-etinye oge na oge ọzọ ma hụ ihe anyị na-ahụ nke a na ikpe Julie van Espen na Steve B..
"Ee, ma Anne Faber dị adị n'ezie. Anyị ahụla ọtụtụ foto banyere ya na anyị ahụla ndị mụrụ ya na foto a ma enwere ihe àmà zuru oke n'ụdị foto na vidiyo na ọ dị. Ọ na-arụ ọrụ ebe a, o wee nwee nwanne na ihe. Anyị ahụla ndị mụrụ ya, anyị ahụwo ihe akaebe dị ukwuu!"Anyị nwere ike ikwu otu nke Julie van Espen. Ha nwere ike ịdịrị adị, ma ọ bụrụ na ị maara onye nwe ụlọ ọrụ mgbasaozi Dutch, ANP dịka ọmụmaatụ, mgbe ahụ, ị ​​makwaara ego nnukwu ego dị n'azụ ya na ihe ọrụ ntanetị nwere ike ịnwe iji mee ka ọ dị ezigbo mkpa. Obughi ihe kpatara na John de Mol (onye nwe ANP) bu onye na-emeputa TV na otu onye na-emeputa ego. Ugbu a, na AI (artificially intelligent) software, ị nwere ike ịmepụta ndị mmadụ na-adịghị adị, wepụta foto na vidiyo nke ihe ha dị ka nwatakịrị, ma si otú ahụ mepụta otu ọrụ netwọk zuru ezu gụnyere akụkọ ihe mere eme na ihe oyiyi na ihe dị mma. Nke a enweela ike na PC nke ị nwere n'ụlọ; hapụ naanị ihe ọkachamara nwere ike ime. Nyochaa vidio dị n'okpuru ebe a iji chọpụta otú nke a si arụ ọrụ (ma gụchaa na-agụ n'okpuru vidiyo).
O doro anya na iwu iwu na-emechibidoro iwu dị na Anne Faber, na a nabatara mgbasa ozi na-akpali akpali nke mmetụta uche iji mee ka ndị mmadụ baa n'ime ya. mmeghachi omume iji mee ka o doo anya. Mmetụta mgbe niile na-arụ ọrụ nke ọma nakwa na i nwere ike iji ndị omee egwu rụọ ọrụ nne na nna ma kpalie mmetụta ahụ. Ònye ga-ekwu? Ònye ga-amata ha? Ọ dịghị onye ọ bụla, n'ihi na a pụghị ịmata ha na ndụ dị adị nakwa na ihe nile ga-abanye (karịsịa) ndị ọrụ mgbasa ozi nke mgbasa ozi ga-asị "Amaara m onye ahụ n'ihi na ọ bụ ihe ọmụma nke"Ma ọ bụ"ọ bụ onye ọrụ nke". Onye na-achịkwa mgbasa ozi na mgbasa ozi ọha mmadụ, nwere ike ịcha na gbanwee echiche zuru ezu nke eziokwu. Lelee vidio dị n'okpuru ebe a iji chọpụta otú ọrụ ahụ si arụ ọrụ. Ya mere ị nwere ike ime ka ihu na-acha anụnụ anụnụ ma mee ka ha dịrị ndụ mgbe gị na onye na-eme ihe nkiri gbara ya ajụjụ, nke mere na 'nna gị' ma ọ bụ 'nne' nwere ike ịgbagha kpamkpam. Nke a nwekwara ike maka ìgwè mmadụ, n'ihi na mgbe ahụ ị na-eme nke ahụ greenscreen. N'ikpeazụ, i nwekwara ike na-arụ ọrụ na nnukwu ìgwè nke ndị omempụ na-eme ihe ike ma ọ bụ Inoffizieller Mitarbeiter. Michael P. anaghị adị n'ezie, Anne Faber nwere ike ịmepụta site na ngwanrọ dị omimi na ajụjụ ọnụ ya na nne na nna ya nwere ike ịdị mfe nghọta. Otu ihe a na-emetụtakwa profaịlụ mgbasa ozi ọha mmadụ na ị na-abata na mkparịta ụka. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Ihe a na-achọpụta ozugbo bụ na ndị uweojii bụ Steve B. bụ ihe na-esonụ vrt.be:
Ihe kachasị mma bụ na ọ bụghị nna nke onye ahụ na-ekwu okwu, mana nna nna. Na Anne Faber ikpe anyị hụrụ nwanne nna ya bụ onye mbụ na-ekwu okwu. Naanị mgbe e mesịrị ka nne na nna malitere ịpụta. Anọ m na-akọwapụta nhọrọ nke ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe ngosi, ebe ihe oyiyi nwere ike idozi ndụ ma nwee ihu ọhụụ nwere ike ịme ngwa ngwa n'ime nyochaa (gụnyere mkpuchi olu). Ndi mgbasa ozi mgbasa ozi nke di njikere ikwu "ọ bụ enyi nke ma ọ bụ ihe ọmụma banyere .."Na-eche na ndị mmadụ ga-akwụsị inwe obi abụọ.
Na ịchọọ Julie, a na-akpọ ọnụ ọgụgụ buru ibu maka ịchọgharị nwa amaala. Nke a nwere ike ime ka mmekọrịta ọha na eze dị ukwuu ma tinye uche niile nke ndị mmadụ n'okwu a. O doro anya na onye omekome a gosikwara na ị ga-enwe ndina n'ike na ya, ị nwere ike were ya na anyị nọ ebe a ọzọ Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta hụ ihe, na iwu ọhụrụ (nakwa na Belgium) na onye ọ bụla nwere ike ijide ogologo oge ma ọ bụ weta ọgwụgwọ ọrịa uche (ma onye ọkachamara uche na-ewere nke a ma ọ bụ). Na Default.be akụkọ:
Gụọkwa ihe n'okpuru isiokwu a maka ntinye. Ị chọrọ ịgụ akwụkwọ Anne Faber dum, pịa ebe a.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: vrt.be, ọkọlọtọ standard
Tags: Anne, Belgium, Faber, agba, Julie van Espen, nkata, Michael, igbu ọchụ, egbu egbu, ikpe ikpe, Nederland, Nederlandse, arụ ọrụ, P., Photoshop, uche, psyop, Steve B., rapist, mmeko nwoke, efu
Ihe magburu onwe ya na Telegraaf:
"Ndị uweojii jidere B. na Monday na ọdụm Leuven. Mgbe ahụ, ọ ga agwa ndị ọchịchị ebe ha ga-achọ ahụ. Mgbe a chọpụtara ya, dịka ndị na-eme nnyocha ahụ si kwuo, nwoke ahụ kwupụtara nkwupụta. Ndị ọchịchị ekwenyebeghị na nke ahụ. "
Ya mere, ị buru ụzọ kwuo ebe ị ga-achọ ahụ, mana ị maghị igbu ọchụ ahụ? Dị ka "Amaara m ebe ọ nọ, ma anaghị m eme ya!"
Peter R. de Vries ekwughị akụkọ banyere nkata foto Photoshop.
Ọ na-atụgharị na-ekwu na nwoke ahụ nọ na foto eserese bụ onye akaebe mara, ma nke ahụ abụghị eziokwu, n'ihi na ndị uweojii ji ụma tụpụpụta nkata ahụ.
N'ime nke ahụ, ọ ka nwere ike ikwu, sị: Ndị uweojii chọrọ ime ka nwoke ahụ kpọtụrụ onwe ya, n'ihi ya, ha kwụpụtara nkata ahụ, nke mere na o nweghi mmetụta nke ịbụ onye a na-enyo enyo.
Uuuuhmm .. dị ka a ga - asị na nwoke ahụ agaghị echeta onwe ya na-ejegharị na nkata ahụ (!)
Ọ na-apụta na onye ogbu ọchụ a gbasasịa na ezi ihe (gbasaa gbasara DNA gị).
Na N'ezie ndị dị ịrịba ama igwe kwụ otu ebe ịnyịnya anọ pụta (nke bụ ọzọ adịghị ịrịba ama) ...
Akwụkwọ Anne Faber PsyOp na-arụ ọrụ dị ukwuu na Netherlands, n'ihi ya Pita gaara enwe ike ire ya na nkwonkwo ya na John de Mol, dị ka ha na-egosi na TV.
Ndebanye aha ego!
Enwere m enyo enyo na De Mol na-etinye aka na nke a, na ihu Julie m na-aghọta BN'ers n'etiti ndị ọzọ, nke bụ n'ezie ihe nkwụsịtụ na NLP. Dịka ọmụmaatụ, lelee anya nke Sophie Hilbrand ..
N'ebe ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii Europe nọ n'okpuru nlekọta EUROGENDFOR.
Akụkọ 'autopsy' na-alọghachikwa n'ebe ndị ọzọ.
London 7 / 7 (abụghị usoro)
Mgbukpọ Brussels. (zoro ezo)
Na ọkara 7 ọ ka juputara na ìhè ... gaara abụ ebe dị jụụ.
Kpamkpam, isiokwu a nwere ntu na isi
A mara ya ikpe na mgbasaozi,
Enweghị ọnwụnwa ma,
ọ dịghị nke ọ bụla, na-ejikarị ọnwa aga
Ma ugbua na-ekwu okwu dị otú ahụ dị ukwuu, ọ na-aghọ nnọọ ihe doro anya.
" Ihe akaebe ndị ọzọ na-egosi mgbasa ozi ndị ọzọ a na-achịkwa site n'aka onye akaebe nke na-achọpụta Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij)
Ndị a na-eleghara anya na-eto eto Zaandam ọzọ a Nsogbu, Reaction, Ngwọta akụkọ? »
Nleta nile: 12.433.702